Vamwe Vashandi veTongaat Hullett Voendeswa kuMudyandigere
Vashandi vakawanda vekambani yeTongaat Hullett, kuTriangle nekuChiredzi, vave kugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera chiziviso chekuti kambani iyi iri kuda kumisa basa vashandi vanosvika zviururu zvushanu.
Muchiziviso ichi, kambani iyi inoti iri kuda kumisa mabasa vanozvipira voga, kunyanya vaya vave nemakore ave pedyo nekuti vachienda pamudyandigere, ichiti iri kuda kutora danho iri nekuda kwekuomerwa nemamiriro ehupfumi hwenyika.
Asi vashandi vakawanda vakatuara neStudio7 vanoti chirongwa ichi chinogona kusiya vazhinji vakatarisana nenhamo yekuzoriritira mhuri dzavo nekuti vanopiwa mari yemudyandogere yemunyika yemaRTGS, iyo vanoti haichina simba.
Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano rinomiriri vashandi pakambani iyi, reSugar Milling and Allied Workers Union, VaMoses Chivanga, vanoti vanoona kuti vashandi vazhinji vasati vasvika pamakore ekuenda pamudyandigere vachamiswa mabasa vopiwa mari shoma isina zvainovabatsira nazvo.
Vamwewo vashandi, kunyanya vemabasa epasi akaita seekutema nzimbe muminda, vanoti chero vakapiwa mari dzemudyandigere vanozotadza kuriritira mhuri dzavo nekuti mari yavanotambira ishoma zvikuru.
Mumwe mushandi aramba kudomwa nezita rake anoti chirongwa ichi chavanyangira vasina kugadzirira, nekudaro vanotyira kuzotambura vamiswa mabasa.
Mutauriri wekambani yeTongaat Hullett, Muzvare Adelaide Chikunguru, vabvuma kuti vari kuita chirongwa ichi vachiti chakanangana nevave nemakore akawanda vari pabasa kuti vandozorora zvakanaka.
Asi vamwe vashandi vanoti pazviuru zvishanu zviri kuronga kumiswa mabasa, vashandi vashoma-shoma vave kusvika pamazera ekuedna pamudyandigere, uye vazhinji vachiri vechidiki vane mhuri diki dzichiri kuda kushandirwa.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions, VaPeter Mutasa, vapomera hurumende mhosva yekuwondonga nyika zviri kuita kuti makambani avhare nekumisa vashandi mabasa.
Gurukota rezvevashandi nemabasa, VaPaul Mavhima vange vasiri kudaira nharembozha yavo kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi.
Asi vashandi vakawanda vanoti kmiswa mabasa chirwadzo chikuru apo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika munyaya dzezvehupfumi.